ka hortagida uur inaad yeelato - iftineducation.com ≡Navigasi Menu
Home → qooyska
→ ka hortagida uur inaad yeelato
ka hortagida uur inaad yeelato
iftineducation.com - Ka hortagga uurka – sidee ayaa looga hor tegi karaa in uur la qaado
Dhammaan aaladaha ka hor tagga uurku waxay kaa ilaalinayaan in aad qaaddo uur aadan doonayn. Kondhomtu waxay kaloo dheertahay in ay cudurradana kaa ilaalineyso. Wiilasha marka la eego fursadda keliya ee u bannaan weil waa kondhomta. Laakiin gabdhuhu fursado badan oo ay kala dooran karaan ayay haystaan.
Mas’uuliyadda is ilaalinta waa mid la wadaago
Ragga iyo dumarka labadaba mas’uuliyad ayaa ka saaran in ay iska ilaaliyaan uurka aan ladoonayn iyo cudurrada galmada – kuwaas oo loola jeedo infakshannada galmada laysugu gudbiyo.
Uur ka hor tegid ikhtiyaar loo doortay
Uur ka hor tegid ikhtiyaar loo doortay waxaa loola jeedaa in ay gabdhuhu iskood u doortaan aaladaha uurka looga hor tago midda ay isticmaalayaan. Lammaanahooda, waalidka ama dadka kale ma go’aamin karaan aaladaha ka hor tagga uurka ee ay isticmaalayaan iyo in ay isticmaalayaan iyo in kale toona.
Yaa kaala talin kara nooca ka hor tagga ah ee aad dooranayso?
Waxaa muhiim ah in aqoon loo leeyahay aaladaha ka hor tagga ee kala duwan si doorasho wanaagsan loo sameeyo. Dhakhtar, kalkaaliso caafimaad ama ummuliso ayaa ku siin karta warbixinta aad u baahan tahay si aad doorasho sax ah u samayso. Waxaa iyaga saaran waajib xogqarin – taas oo loola jeedo in aanay cid kale u sheegeyn waxa aad ka wada hadashaan. Marka uu qofku helo hab uur ka hor tag oo ku habboon oo qofku ammaan ku dareemayo, waxay taasi gacan ka geysanaysaa nolol galmo oo wanaagsan iyada oo aan welwel laga qabin in la qaado uur aan lagu tala gelin. Shaqaalaha caafimaadku waxay wax kaa weydiin doonaan caafimaadkaaga iyo qaab-nololeedkaaga, caafimaadka qoyskiinna waxayna cabbiri doonaan cadaadiska dhiiggaaga. Waalidkaa weydii in ay jiraan dad qoyskiinna soke ah oo uu ku dhacay xinjir-xiran (blodpropp) ka hor intaysan gaarin 45 sano. Haddii aad su’aalaha uga jawaabto si daacad ah waxaa markaa lagaa caawinayaa doorashada aalad uurka looga hor tago oo aan wax khatar ah oo xagga caafimaadka ah kuu keenayn.
Tani xataa way khuseysaa dadka ay da’doodu ka yar tahay 16 sano
Uur ka hor tegidda ikhtiyaarka loo dooranayo wuxuu sidoo kale khuseeyaa dhallinyarada ay da’doodu ka hooseyso 16 sano. Caadi ahaan waxaa la yiraahdaa in gabdhaha da’ ahaan uurka qaadi kara, ay dooran karaan hababka kala duwan ee ka hor tagga uurka intooda badan. Ma jiraan sababo wanaagsan oo dhakhtarku uu kuugu diido ka hor tag uur. Waxaa laga yaabaa in dhakhtarku kaala hadlo inta sano ee uu lammaanahaagu jiro, in aad adigu galmo dooneyso oo aad galmada ka hesho. Dhakhaatiirta qaar baa kuu soo jeedinaya in aad waalidkaa u sheegto in lagu siiyay aalad uurka looga hor tago.
Caawinta dhaqaalaha ee ka hor tagga uurka
Dawladdu waxay siisaa gabdhaha ay da’doodu u dhexayso 16 iyo 20 sano 100 karoon oo caawin ah marka ay gadanayaan uur ka hor tag hormoon ah (hormonell prevensjon). Farmashiyaha ayaa qiimaha aad wax ku gadanayso ka goynaya lacagtan caawinta ah, markaa wuxuu qofku bixinayaa inta u dhexaysa boqolkaas caawinta ah iyo qiimihi shayga. Qaarkood ayaaba jooga wax 100 karoon ka yar markaa bilaash ayaa lagugu siinayaa.
Aaladaha ka hor tagga uurka ee kala duwan:
Aaladaha ka hor tagga uurka ee aad kala dooran karto:
Kaniinka P-pillen waa habka ka hor tagga uurka ee ugu caadisan uguna faca weyn. Gabdhaha badankoodu marka ugu horreysa ee ay aalad ka hor tag isticmaalayaan waxay doortaan kaniinka p-piller. Nidaamkan ka hor tagga uurku wuxuu ku habboon yahay kuwa xasuusta in ay maalin walba kaniiniga qaataan. Balaastigga p‐plaster
Balaastigga p-plaster waa balaastig maqaarka lagu dhejiyo. Hormoonnada balaastigga ayaa maqaarku qaadanayaa. Si fiican ayuu balaastiggu jirka ugu dhegaa, laakiin ku dhejintiisa iyo fujintiisuba waa fudaddahay. Kulayl iyo qoyaan labadaba waa u adkeysan karaa. Qubeyska, dabbaasha, jimicsiga iyo qolka laysku kululeeyo (badstue) intaba waa u adkaysan karaa. Balaastigga toddobaad walba beddel muddo 3 toddobaad ah. Hal toddobaadna iska daa balaastigga caadada dumarka darteed.
Faraantiga p-ring waa faraanti balaastig jilcan ka samaysan oo siilka la geliyo. Adiga ayaa dhib la’aan isu gelin kara oo iska saari kara. Haddii si sax laysu geliyo lama dareemayo marka galmada la samaynayo iyo dhaqdhaqaaqa maalinta toona. Hal faraanti ayaa siilka loo daayaa muddo 3 toddobaad ah. Hal toddobaadna waa layska daayaa caadada dumarka darteed
Cirabadda P-sprøyte waxaa ku jira hormoonka gestagen. Cirbaddu uurka ayay ka hor tagtaa sida kaniinka p-piller oo kale. Halki cirbad waxay shaqaynaysaa 3 bilood
Caagga p-stav waa caag balaastig ah oo uu ku jiro hormoon!!!. Caagga waxaa la geliyaa cududda qaybteeda feeraha xigta. Qofka kabuubiso ayaa la siiyaa marka caagga la gelinayo. Caagga lama arki karo, laakiin waa la dareemi karaa marka faraha lagu riixo. Caaggu kordhin maayo khatarta loogu jiro xinjir-xiranka, waxaana sidaas darteed isticmaali kara dadka aan isticmaali karin aaladaha ka hor tagga uurka ee uu ku jiro hormoonka østrogen. Halki caag wuxuu shaqeeyaa 3 sano.
Balaastigga hormoonku waa balaastig leh hormoonka gestagen. Waxaa lagu xiraa ilmagaleenka waxaana ku xira dhakhtar. Balaastiggu wuxuu kugu xirnaan karaa 5 sano. Waa la isticmaali karaa xataa haddii aadan uur yeelan. Dhakhtar ama ummuliso ayaa balaastigga ilmagaleenka ku xiraya. Balaastigga hormoonku kordhin maayo khatarta loogu jiro xinjir-xiranka, waxaana sidaas darteed isticmaali kara dadka aan isticmaali karin aaladaha ka hor tagga uurka ee uu ku jiro hormoonka østrogen.
Dun maar ah
Dunta maarta ah waxaa laga sameeyay balaastig iyo maar dhuuban. Waxaa lagu xiraa ilmagaleenka waxaana ku xira dhakhtar. Maartu waxay kugu xirnaan kartaa 5 sano. Waa la isticmaali karaa xataa haddii aadan uur yeelan. Toddobaadka ugu horreeya waxaad khatar intii caadiga ahayd ka weyn ugu jirtaa in uu infakshan kugu dhaco. Haddii ay xummad ku qabato ama aad jirro dareento ama guduhu ka xanuunu ama dareere midab leh oo uraya uu kaa yimaado – kaas oo ka badan intii hore, markaa dhakhtar la xiriir. Toddobaadka u horreeya marka maarta lagugu xiro kaddib in aad qubeysato iyo in aad galmo samayso midna looma baahna. Wax hormoonno ah kuma jiraan.
Femidom waa kondhom dumarka loogu tala galay waxayna wax u difaacdaa sida kondhomta oo kale. Waa caag ballaaran oo laba af oo wareegsan labada dhinac ku leh. Inta isku qabatid femidomta afkeeda xiran dabadeena siilka geli. Femidomtu Norway aad uguma badna waxaana laga yaabaa in ay heliddeedu adkaato. Haddii aad internetka ka raadiso waxaad heli kartaa bogag aad femidom ka dalban karto
Kaniiniga yar waxaa ku jira hormoonka gestagen oo keliya wuxuuna uurka u ilaaliyaa si la mid ah sida kaniinka p-piller. Hal kaniini ayaad maalin walba isku wakhti qaadanaysaa. 7 maalmood ka boodi meysid. Haddii aad kaniiniga yar billowdo maalinta koowaad ama maalinta labaad ee caadada dumarka laga billaabo kaniiniga koowaad ayaad difaacan tahay. Haddii aad billowdu wakhti ka duwan labadaas maalmood qaadista uurka kama difaacnid ilaa laga gaaro kaniiniga siddeedaad. Toddobada maalmood ee hore ku garab isticmaal wax kale oo uurka ka hor taga. Kaniinka yari kordhin maayo khatarta loogu jiro xinjir-xiranka, waxaana sidaas darteed isticmaali kara dadka aan isticmaali karin aaladaha ka hor tagga uurka ee uu ku jiro hormoonka østrogen
Ka hor tag degdeg ah
Ka hor tagga degdegga ah waxaa la isticmaali karaa marka galmo la sameeyo iyada oo aan wax ka hor tag ah la isticmaalin, ama haddii ay kondhomti dillaacdo islamarkaana aanan la isticmaalayn ka hor tag hormoon ah. Ka hor taggani wuxuu hoos u dhigayaa fursadda uurka lagu qaadi karo, laakiin ma aha mid 100 % la isku hubo. Noocyada ka hor tagga degdegga ah qaarkood, sida Postinor iyo Norlevo, ayaa farmashiyaha laga soo iibsan karaa iyada oo aan la wadan warqad dhakhtareed. Sidoo kale waxaa jira ka hor tag degdeg ah oo u baahan warqad dhakhtareed sida Ellaone.
Postinor iyo Norlevo Marka la isticmaalayo ka hor tag degdeg ah oo aan u baahnayn warqad dhakhtareed waa in kaniinka loo qaataa sida ugu dhakhsaha badan ee suuragalka ah, 72 saacadood gudahood marka galmada la sameeyay. Waxaa hubitaankoodu gaarsiisan yahay ilaa 90 % marka la qaato 24 saac gudahood. Hubitaanku wuxuu u dhacaa ilaa 58 % 72 saac gudahood galmada kaddib.
Ellaone Ka hor tagga degdegga ah ee u baahan warqadda dhakhtarka waxaa la qaadan karaa ilaa 120 saacadood galmada kaddib. Ellaone waxaa laysku hubi karaa in ka badan inta laysku hubi karo Postinor iyo Norlevo.
Waxaa iyana ka hor tag degdeg ah ahaan loo isticmaali karaa nooca dunta maarta ah, waxaa maarta lagu gelinayaa ka hor intaysan 5 habeen iyo 5 maalmood ka soo wareegin galmada